Mihoatra ny salanisan'izao tontolo izao ny fitomboan'ny mpitsidika sinoa
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Mihoatra ny salanisan'izao tontolo izao ny fitomboan'ny mpitsidika sinoa
Handeha ho any Eropa ny Sinoa amin'ny isa marobe kokoa hatrany hankalaza ny Taombaovao amin'ity herinandro ity (4-10 feb) Ny famandrihana any amin'ny toeran'ireo vondrona eropeana dia mialoha 9.2% raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ny fitomboan'ny mpitsidika dia mihoatra lavitra noho ny salan'isa manerantany izay 0.2% hatramin'ny 2018.
Ireo mpizahatany sinoa dia toa tsy tohanan'ny fihemoran'ny harinkarena sinoa, ary ny ahiahy amin'ny vokatry ny Brexit, vaovao miarahaba ho an'ny indostrian'ny fitsangantsanganana eropeana ao anatin'izany ny fivarotana antsinjarany.
Ny eropeana dia miarahaba vahoaka be sinoa mpivahiny roa herinandro alohan'ny herinandro volamena amin'ny taona 2019. Ho an'ireo mpitsidika ireo dia misy karazana fialantsasatra roa samy hafa: na, mankalaza ny taom-baovao ireo mpitsangatsangana amin'ny alàlan'ny fitsidihana lava any EU, na miala any izy fitsangantsanganana tampoka ary miverena any Sina ho an'ny fankalazana eo an-toerana mandritra ny herinandro volamena.
Ny faritra avaratra EU dia mampiseho ny fitsambikinana lehibe indrindra tamin'ny taon-dasa tamin'ny famandrihana mialoha 19%. Ny tapany afovoany sy atsinanana an'ny UE ihany no taraiky, ao aorinan'ny 3.7%. Ny EU manilika an'i UK dia mampiseho fitsangantsanganana 8.1% amin'ny famandrihana.
Ny tarehimarika farany dia mampiseho fa ny Taom-pizahan-tany EU-China 2018, notohanan'ny The European Travel Commission (ETC) hampiroborobo an'i Eropa ho toeran'ny tsena sinoa mivoatra haingana, dia mitohy mitondra fahombiazana.
Olivier Ponti, VP Insights, ForwardKeys, masoivoho izay nandinika ireo fikarohana farany ireo dia naneho hevitra hoe: “Ireo mpizahatany sinoa dia toa manana an'i Eropa ho lohalaharana amin'ireo toerana haleha lavitra indrindra. Ny hetsika ara-barotra hitondrana azy ireo eto dia nahagaga ary nandoa vola. Hatreto na ny toekarena sinoa, na Brexit, dia tsy nahasakana azy ireo ka rariny raha milaza fa ny indostrian'ny fizahan-tany any Eropa dia kasaina hankalaza ny taom-baovao sinoa. ”